चीनको विस्तारवादी योजनाबारे काठमाडौं मौन किन ? – Tharuwan.com
चीनको विस्तारवादी योजनाबारे काठमाडौं मौन किन ?
प्रकाशित : २०७८ पुष २० गते ६:१२
हिमाली राष्ट्रमा चीनको विस्तारवादी योजनाबारे काठमाडौं मौन रहेको छ किनभने हुम्ला, गोरखा, दार्चुला, दोलखा र सिन्धुपाल्चोक लगायतका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा बेइजिङले अवैध अतिक्रमण गरेको धेरै सञ्चारमाध्यमहरूले देखाएको छ।
गत भदौमा नेपाल सरकारले हुम्लाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको नेपाल-चीन सीमा अध्ययन गर्न गृहसचिवको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । टोलीले विशेषगरी लिमी उपत्यकाका सीमा स्तम्भको अध्ययन गरेको र प्रारम्भिक नतिजाले नेपाल र चीनबीच केही गम्भीर सीमा समस्या रहेको पुष्टि गरेको छ ।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिए पनि चीनबाट यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि गृह मन्त्रालयले निष्कर्ष रोकेको स्रोतले जनाएको छ । अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न खटिएको टोलीका सदस्य जयनारायण आचार्यले भने, ‘हामीले प्रतिवेदनमा यस क्षेत्रमा निर्माण भएका भौगोलिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक समस्या र भौतिक पूर्वाधारलाई समेत समावेश गरेका छौं । स्थानीय जनतासँगको हाम्रो अन्तरक्रियाका क्रममा प्राप्त निष्कर्ष प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।”
‘भ्रमणका क्रममा सीमास्तम्भमा तार तार लगाएर मर्मत गरिएको पनि थाहा भयो तर वास्तवमा कसले गरेको हो थाहा छैन । दुवै देशका संयुक्त निरीक्षण टोली गठन गरी कूटनीतिक तवरले मुद्दा अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छौं ,’ आचार्यले भने । । गृह मन्त्रालय भित्र रहेको एएनआई स्रोतले नेपालले यस विषयमा चिनियाँ पक्षलाई सम्पर्क गरेको तर अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नआएको पुष्टि गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)लाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छैन, तर नेपाली अखबारले सीडीओलाई उद्धृत गर्दै चिनियाँ भूभाग १ किलोमिटर भित्र निर्माण भएको बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीनसँग वार्ता गरेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन आग्रह गर्दै संसदमा प्रस्ताव पेश गरेको नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको हो । आरोपहरूले काठमाडौंमा चिनियाँ दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन पनि निम्त्यायो, जहाँ प्रदर्शनकारीहरूले “चिनियाँ हस्तक्षेप रोक्नुहोस्” र “चिनियाँ अतिक्रमण” भन्ने नारा लगाएका थिए। त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकोमा ओली सरकारले बेइजिङलाई खुसी पार्ने र मौन बसेको आरोपसमेत लगाएका थिए ।
शेष गरी तिब्बत चीनको स्वायत्त क्षेत्रको हिस्सा बनेपछि र पहिलो पटक दुई छिमेकीबीच १ हजार ४३९ किलोमिटरको सिमाना जोडिएपछि विगत केही दशकहरूमा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ। नेपाल र चीनले 21 मार्च, 1960 मा नेपाल-चीन सीमा सम्झौता मार्फत सीमा रेखा निर्धारण र सीमांकन गर्ने निर्णय गरे। यो सीमा सम्झौताले थापाथली सन्धिलाई प्रतिस्थापन गर्यो र तिब्बतमा चीनको सार्वभौमसत्तालाई मान्यता दियो र पुरानोले दिएको सबै विशेषाधिकार र अधिकारहरू त्याग गर्न सहमत भयो। सन्धि दुवै पक्षको विस्तृत सर्वेक्षण र नक्साङ्कनपछि अक्टोबर ५, १९६१ मा सीमा सन्धिको औपचारिक समझौता भएको थियो।
देशको परम्परागत प्रयोग, सम्पत्ति र सुविधाका आधारमा सीमा रेखा निर्धारण गरिएको थियो । द्वन्द्वका क्षेत्रहरू थिए जहाँ ‘दिनुहोस् र लिनुहोस्’ नीति प्रयोग गरियो। नेपालले चीनलाई १ हजार ८३६ वर्ग किलोमिटर जमिन दिएको थियो भने चीनले नेपाललाई २ हजार १३९ वर्ग किलोमिटर जमिन दिएको थियो ।
यसबाहेक, हिमालयन दायराको जलाधार सिद्धान्तलाई उत्तरी तर्फको सिमाना निर्धारण गर्न प्रयोग गरिएको थियो। यस क्षेत्रले विभिन्न पासहरू, हिमाल चुचुराहरू र चरन भूमिहरू समेट्छ। एक देशका नागरिकको चरन जग्गा सिमानाको अर्को छेउमा परेको अवस्थामा जग्गाधनीलाई नागरिकताको छनोट दिइयो। तर, विगत केही दशकहरूमा सीमालाई लिएर केही साना द्वन्द्वहरू देखा परेका थिए।
उदाहरणका लागि, दोलखा जिल्लाको लामाबगर क्षेत्रको लप्चीगाउँको उत्तरमा रहेको ५७ अंकको स्तम्भ सुरुमा अनुमान गरिएको भन्दा पनि नेपाल भित्रै राखिएको दाबी गरिएको छ । विवाद छ हेक्टर जग्गाको हो र यही विवादका कारण चौथो प्रोटोकल अझै रोकिएको छ। सगरमाथा (सगरमाथा) को स्वामित्वमा अर्को विवाद थियो तर 1960 मा चाउ एन-लाइको काठमाडौं भ्रमणसँगै उनले सगरमाथा नेपाली जनताको हो भनेर स्पष्ट गरे। (एएनआई)